AKHRISO: Puntland & DF Soomaaliya oo qarka u fuulay in Khilaaf ku kala tagaan, Arrimo xasasi ah oo laga hadlay iyo Wararkii u dambeeyey – Puntlandtimes
AKHRISO: Puntland & DF Soomaaliya oo qarka u fuulay in Khilaaf ku kala tagaan, Arrimo xasasi ah oo laga hadlay iyo Wararkii u dambeeyey
August 1, 2018 W LAASCAANO
GAROOWE(P-TIMES)- Warsidaha Puntlandtimes.com wuxuu ogaaday in uu jiray kulan xasaasi ah oo dhexmarayay tan iyo xalay Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Max’ed Cali Gaas iyo Ra’iisulwasaaraha dawladda Faderaalka Xasan Cali Kheyre, kaas oo gabi ahaantiisba loga hadlayay arrimaha siyaasada ee u dhaxeeya labada dhinac, waxaana gaar loo soo qaaday qadiyadii ugu dambeysay.
Warsiduhu wuxuu ogaaday in kulankas uu gaaray meel xasaasi ah, oo ay dhinacyadu aad ugu dhawaadeen in ay isku khilaafaan arrimaha qaarkood, waxaana Puntland ay ku adkeystay sidda ay waajibka u tahay in Nidaamka Faderaalisimka ee dalkan uu noqdo mid taabagal ah oo aan cidna ka hor imaan Karin.
Ra’iisulwasaaraha Soomaaliya oo diiday in uu ka qeybgalo dhagax-dhigida Dekeda Garacad ayaa u arkayay mid dhib ku ah dekeda Hobyo ee maamulka Galmudug oo uu ka soo jeedo, taas oo Shacabka & Isimadda Puntland u aqoonsadeen fariin ka soo baxday Kheyre.
Subaxnimadii hore ee maanta ayuu qarka u fuulay kulanka golaha Xukuumada Faderaalka ee berri ku qabsoomi lahaa Garoowe in laga baaqsado, balse tanaasul ay sameysay Puntland ayaa la sheegay in lagu qabanayo.
Sidaas oo kale in Puntland ay hesho Deeqaha caalamiga ah doorkeeda ayaa kamid ah arrimaha ilaa hadda aan waxba is afgarad ah laga gaarin, sidaas oo kale dib u eegista Dastuurka iyo qodobada la xariira hanaanka hirgalinta qodobadii Hogaamiyaasha wadatashigu ku heshiiyeen ayaa kamid ah arrimaha lasoo qaaday.
Warar hordhac ah ayaa sheegaya in uu hadda bilow yahay khilaafka u dhaxeeya Puntland iyo dawladda Faderaalka, kaas oo halistiisa leh in uu isku bedelo mawqif siyaasadeed iyo mooshin ka dhex abuurma baarlamaanka Faderaalka ee Soomaaliya, xili ay dawlad gobaleedyadu aad iskugu dhagan yihiin qadiyadaha qaarkood.
Madaxweynaha Puntland ayaa shalay ka sheegay Garacad, in haddii lagu xadgudbo dhankooda oo wanaagii ay sameeyen loo arki waayo ay sii wadayaan Wanaaga, taas oo ahayd duurxul siyaasadeed oo xoog badan, laguna muujinayo in aysan Madaxtooyada Puntland jeclaysan hab dhaqankii uu sameeyey ra’iisulwasaare Xasan Cali Kheyre.